यसरी लुट्यो यातायातले | सुदुरपश्चिम खबर
यसरी लुट्यो यातायातले
भ्याइस अफ द भ्वाइसलेस
‘किन ? ’, मैले सोधें ।
म राज्यलाई जति तिर्न पनि तयार छु । तर, मसँग राजीखुसीले उठाउनुपर्छ । वा, न्यायपूर्वक असुल्नुपर्छ । मैले राजस्व मारेको थिइनँ । कर छलेको थिइनँ । मेरो नियत पनि त्यो थिएन । बरु राज्यले लिएको अग्रिम भुक्तानीको स्याबासी पाउने आशा गरेको थिएँ, उल्टै सजाय भोगें । के लोकतान्त्रिक राज्य यस्तै हुन्छ ?
म त्यो ४ हजार ६ सय २० रुपैयाँमा अरू त्यति नै थपेर यातायातकै खातामा हालिदिनेछु